समृद्धिको यात्रामा प्रधानमन्त्री ओली, प्रदेश र स्थानिय तहमा के-के काम भयो ? - 761खबर.com
समृद्धिको यात्रामा प्रधानमन्त्री ओली, प्रदेश र स्थानिय तहमा के-के काम भयो ?
८ महिना अगाडि –तीर्थ भट्टराई
काठमाडौँ, ४ चैत : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भर्खरै एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले एक वर्षका उपलब्धिबारे चर्चा गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नै शुरु गर्नुभएको तुइन विस्थापन कार्यले यस अवधिमा पनि गति लिँदै धेरै स्थानमा तुइनको ठाउँमा पुल बनेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको काम अन्तिम चरणतर्फ पुगेको छ भने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण पनि शुरु भएको छ । यो योजनाको शिलान्यास नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उहाँ नेपालको भ्रमणमा आएका बेला गत वैशाख २८ गते काठमाडौँबाटै गरिएको थियो । लामो समयसम्म अनिश्चयमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको यो योजना उहाँकै समयमा शुरु भएको हो ।यसैगरी भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि यस अवधिमा आठ किमि सुरुङ निर्माण भएको छ । धेरै वर्षको राजनीतिक अन्योलपछि देशमा शान्ति आएकाले सरकारले यस अवधिमा ४९७ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नाका साथै २२१ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गरेको छ । यही अवधिमा ८७ वटा पक्की पुल निर्माणका साथै ४१७ वटा झोलुङ्गे पुल पनि बनाइएका छन् ।
यसबाट भद्रपुरलगायत झापाका नगरमा चहलपहल तथा व्यापार व्यवसाय बढ्नाका साथै सीमाक्षेत्रका जनताको कष्ट अन्त्य भएको छ भने यसलाई सरकार स्थिर हुनु र विकासका गतिविधि बिनाअवरोध पूरा हुन थालेको अर्को दृष्टान्तको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । यस्ता सफलताबाट जनतामा अब विकासका योजना क्रमशः पूरा हुने विश्वास पलाउन थालेको देखिएको छ भने सरकारले केही गरेन भन्नेहरूले यस्ता तथ्यलाई पनि मनन गर्नुपर्ने भएको छ । -रासस –––